ALAKAMISY 28 JANOARY 2021
NOSY BE : Vehivavy iray 29 taona mpisoloky efa nahazo vola an-tapitrisany voasambotra
Vehivavy iray 29 taona, malaza ratsy amin’ny fisolokiana sy fivadiham-pitokisana no tra-tehaky ny Zandary avy amin’ny Borigadin’ny Zandary Dzamandzar, omaly talata 27 oktobra. 28 octobre 2020
Olona miisa efatra samy hafa no nakan’ny vola saingy tsy misy naveriny tamin’ny fe-potoana nomeny avokoa no sady omeny fotoana lava. Ny sasany tamin’ireo olona nisolokiany aza nampanantenainy fa mahatafiditra olona hiasa ao amin’ny « aéroport » izy ary mikarama roa hetsy sy iray tapitrisa Ariary. Nototofany lainga avokoa anefa ireo olona nakany vola. Tezitra, araka izany, ireo olona nanaovany hafetsena ireo ka nametraka fitoriana teo anivon’ny Zandary mba hanokatra ny fanadihadiana momba azy io. Fantatra tamin’ izay fotoana izay ary fa vola mitentina 1 653 000 Ariary eo ho eo no lasan’ity farany.
Rehefa natao ny velam-pandrika dia voasambotra tao Ampasikely io vehivavy io noho ny fiaraha-miasa tamin’ny fokonolona, niampy ny vaovao marim-pototra. Ny fanampim-panazavana voaray avy tamin’ny kaomandàn’ny Borigadin’ny Zandary tao Dzamandzar Nosy Be Raherimaminirainy Zoly hatrany dia fantatra rahateo koa fa mbola nisoloky ho manambady mpiandry fonja ary mipetraka ao amin’ny fonja izy saingy tsy marina rehefa natao famotorana lalina. Atolotra ny Fitsaràna ny raharaha aorian’ny fanadihadiana .
Tovolahy 18 taona nanolana an-jandriny vavy 06 taona voasambotra ANATIHAZO-ISOTRY (366) 25 janvier 2021 Ho azo tanterahina eto Madagasikara ny fandidiana famindrana voa FIANGONANA SY NY FANJAKANA (98) 25 janvier 2021 Niakatra 442 ny marary vaovao, 06 ny namoy ny ainy FIVOARAN’NY COVID-19 (90) 25 janvier 2021 Mpanendaka miisa 06 sy mpifoka rongony roa saron’ny Polisy ASAN-JIOLAHY ETO AN-DRENIVOHITRA (83) 25 janvier 2021 Mikatsaka ny fampidinana ny vidin-jiro sy rano eto Madagasikara FILOHA ANDRY RAJOELINA (73) 25 janvier 2021 Tonga ireo fitaovana vaventy fanaovan-dalana FANOMEZANA FAHALEOVAN-TENA NY FARITRA (55) 25 janvier 2021